၂၃ ဇွန်. ဇွန်လ၊ ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တ
၁၇ နှစ်အောက် မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
ⓘ ၂၃ ဇွန်. ဇွန်လ၊ ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ ရက်မြောက် ရက်မြောက် နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း ရက် ကျန်သေးသည်။ ..
၁၇ နှစ်အောက် မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း သည် အသက် ၁၇ အောက်ရှိ ဘောလုံးသမားများအားစုစည်းထားပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ယှဉ်ပြိုင်သည်။ အဆိုပါအသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည်။
ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ် သည် ဆိုနီ မှ ထုတ်လုပ်သော လက်ကိုင်ဂိမ်းစက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဆိုနီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် လည်းကောင်း၊ မြောက်အမေရိကတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း အသီးသီးရောင်းချခဲ့သည်။ ပလေးစတေရှင် ပေါ့တေးဘဲလ် သည် Universal Media Disc UMD ဟုခေါ်သည့် စနစ်ကို အဓိကသိုလှောင်မှုစနစ်အဖြစ် အသုံးပြုထားသည့် တစ်ခုတည်းသော လက်ကိုင်ဂိမ်းစက် ဖြစ်သည်။ အခြားသိသာထင်ရှားသည့် အချက်များမှာ ကြီးမားသည့် ဖန်သားပြင်ပါဝင်ခြင်း၊ ပလေးစတေရှင် ၂၊ ပလေးစတေရှင် ၃ စသည့် ဂိမ်းစက်များနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိ ...
၁)ဇရပ်မသွီး တန်းထားမာချီး။ ၂)နောက်ကျဂေ လဒလင်းဒမာ အရိုး၊ လူမာ အိုး၊ ဖုန်းဘုန်းကြီးမာ သပိတ်၊ သူတော်မမာ အိတ်။ ၃)ဆင်းရဲ လလူမွဲကို နတ်မြင်၊ မချိလို့ သွားကြဲဂေ ရယ်ယောင်ထင်ရေ။ ၄)ဆင်းရဲလို့ အငှားခံဂေ၊ သူဋ္ဌီးသားက အကြွီးခိုင်းရေ။ ၅)ဆင်းရဲလို့ဖင်ခံဂေ၊ သူဋ္ဌီးသားက အကြွီးနှက်တေ။ စကားပုံဟိအတိုင်းပါ။ရိုင်းဂါရိုင်းပါရေ ၆)မဟိမကောင်း ဟိမကောင်း၊ မကောင်းခက်တေ ကောင်းခက်တေ။ ၇)မဟိဒုက္ခ ဟိဒုက္ခ။ ၈)မပြောဂေ မဗြီး မတီးဂေမမြည်။ ၉)လိပ်မှိုကိုရရေပိုင်ချောင်။ ၁၀)ကျွဲနားမာ စောင်းတီးရေပိုင်ချောင်။ ၁၁)သောင်ပြင်မာတင်ထားရေ ခွီးပိုင်။ ၁၂)ချစ်ဂါ ချစ်တေ ယဂေလေ့။ ၁၃)လင်ရဖို့ခါ မ,ရာနားပဲ့ရေ။ ၁၄)မပြည့်ရီအိုး ဘောင်ဘင်ခတ်။ ၁၅)အိမ်ဂါ ...
Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy XXXTentacion, အဖြစ်သိကျပြီး, အမေရိကန်ရက်ပ်အဆိုတော်နှင့်တေးရေးဆရာဖြစ်သည်။ XXXTentacion သည် မိမိ၏တိုတောင်းလှသော အနုပညာသက်တမ်းအတွင်း Teenager ပရိတ်သတ်များကြားတွင် သူ၏သီချင်းများသည် အောင်မြင်မှုများရှိခဲ့သည်။ဝေဖန်သူများနှင့် ပရိသတ်များက ဂီတဘက်တွင်ထူးချွန်မှုအတွက်သူ့ကိုမကြာခဏချီးကျူးလေ့ရှိသည်။ Xသည် emo, trap, lo-fi, indie rock, nu metal, hip hop, R&amp;B နှင့် punk rock စသည့်ဂီတအမျိုးစားများကို သီဆိုခဲ့သည်။ သူသည် emo-rap နှင့် SoundCloud Rapper များတွင် ဦး ဆောင်သူတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီး ၂၀၁၀ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် လူများရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဖလော်ရီဒါ Plantat ...
ⓘ ၂၃ ဇွန်
ဇွန်လ၊ ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ ရက်မြောက် ရက်မြောက်) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း ရက် ကျန်သေးသည်။
၁၇၆၃ – ဂျိုးဇဖင်းမိဖုရား၊ ပြင်သစ်လူမျိုး၊ နပိုလီယန်၏ ဇနီး ၁၈၁၄ ကွယ်လွန်
၁၉၁၂ – အလန် ကျူးရင်း၊ ဗြိတိန်လူမျိုး သင်္ချာပညာရှင်၊ ယုတ္တိဗေဒပညာရှင်၊ ဝှက်စာပညာရှင်နှင့် ဇီဝဗေဒ အသုံးချသင်္ချာပညာရှင် ၁၉၅၄ ကွယ်လွန်
Wikipedia: ၂၃ ဇွန်
၁၇ နှစ်အောက် မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံး ..